ကိုးလလွယ်၊ဆယ်လဖွားပေးခဲ့တဲ့ မေမေ့ကို သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ဘုရားတွေလိုက်ပို့ပေးပြီး ပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခဲ့တဲ့ ပုလဲဝင်း - TGI Daily News
ကိုးလလွယ်၊ဆယ်လဖွားပေးခဲ့တဲ့ မေမေ့ကို သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ ဘုရားတွေလိုက်ပို့ပေးပြီး ပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခဲ့တဲ့ ပုလဲဝင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပုလဲဝင်းကတော့ အခုချိန်မှာဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပုလဲဝင်းက တစ်ခေတ်တစ်ခါမှာဆိုရင် ကြော်ငြာတွေအများအပြားရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ ပုလဲဝင်းရဲ့ စကားပြောဟန်လေးတွေကိုချစ်ပြီး သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အားပေးဝန်းရံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပုလဲဝင်းက လက်ရှိအချိန်ထိလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို တစ်ခဲနက်ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပုလဲဝင်းကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် သွက်လက်ဖျက်လက်ပြီး အရမ်းတက်ကြွတဲ့မင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပုလဲဝင်းက အခုချိန်မှာတော့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အလှတရားတွေနဲ့ ပျိုမျစ်နုနယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးဟာဆိုရင်တော့ ပုလဲဝင်းရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်လို့ ချစ်ခင်သူတွေက မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေရေးပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပုလဲဝင်းက လက်ရှိမှာဆိုရင် နေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာတော့ ပုလဲဝင်းက မေမေနဲ့အစ်မဖြစ်သူကို နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုလိုက်ပို့ပေးပြီး မွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပုလဲဝင်းက”ရောက်တာကြာနေပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလမို့ ဘယ်မှ မရောက် မပို့ပေးရသေးသော မားမားနဲ့ အစ်မ…. မွေးနေ့ဘုရားရောက် အမှတ်တရ”ဆိုပြီး သားအမိသုံးယောက်ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
Source and Photo Credit:Pearl Win
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောတဈယောကျဖွဈတဲ့ ပုလဲဝငျးကတော့ အခုခြိနျမှာဆိုရငျ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့အလှမျးဝေးကှာနတောဖွဈပါတယျနျော။ပုလဲဝငျးက တဈခတျေတဈခါမှာဆိုရငျ ကွျောငွာတှအေမြားအပွားရိုကျကူးခဲ့ရပွီး ဇာတျကားတှမှောလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေတော့ ပုလဲဝငျးရဲ့ စကားပွောဟနျလေးတှကေိုခဈြပွီး သူမရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုတိုငျးကို အားပေးဝနျးရံခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျနျော။
ပုလဲဝငျးက လကျရှိအခြိနျထိလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုတှကေို တဈခဲနကျပိုငျဆိုငျထားဆဲဖွဈပါတယျ။ပုလဲဝငျးကတော့ ငယျငယျတုနျးကဆိုရငျ သှကျလကျဖကျြလကျပွီး အရမျးတကျကွှတဲ့မငျးသမီးလေးပဲဖွဈပါတယျနျော။ပုလဲဝငျးက အခုခြိနျမှာတော့ ရငျ့ကကျြတညျငွိမျတဲ့အလှတရားတှနေဲ့ ပြိုမဈြနုနယျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ဒီနလေ့ေးဟာဆိုရငျတော့ ပုလဲဝငျးရဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးဖွဈလို့ ခဈြခငျသူတှကေ မှေးနဆေု့တောငျးလေးတှရေေးပေးထားကွတာဖွဈပါတယျနျော။
ပုလဲဝငျးက လကျရှိမှာဆိုရငျ နပွေညျတျောမှာနထေိုငျနပွေီး အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့ဘဝကိုလြှောကျလှမျးနတောဖွဈပါတယျ။ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ပုလဲဝငျးက မမေနေဲ့အဈမဖွဈသူကို နပွေညျတျောမှာရှိတဲ့ဘုရားတှကေိုလိုကျပို့ပေးပွီး မှေးနပှေဲ့လေးကငျြးပကွတာဖွဈပါတယျ။ပုလဲဝငျးက”ရောကျတာကွာနပေမေယျ့ ကိုဗဈကာလမို့ ဘယျမှ မရောကျ မပို့ပေးရသေးသော မားမားနဲ့ အဈမ…. မှေးနဘေု့ရားရောကျ အမှတျတရ”ဆိုပွီး သားအမိသုံးယောကျရဲ့ ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝလောခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။
ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာသူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ရေမွန်